မြစ်ဆုံ: ၀ီစကီ သို.မဟုတ် ကျနော်နှစ်သက်မိသော တေးသွားလေး
၀ီစကီ သို.မဟုတ် ကျနော်နှစ်သက်မိသော တေးသွားလေး
I Love You Forever.. You come Home.....
ဒီသီချင်းလေးကမောင်မောင် အရမ်းကြိုက်တဲ.သီချင်းလေးပါ။ သစ္စာမရှိတဲ. အကြောင်းလေးကို ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ပြီးလို. စိတ်ကူးတွေ အိမ်မက်တွေနဲ. အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ. စစ်သားတစ်ယောက် ကိုယ်.မိန်းမက တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ. ဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ.လိုက်တော. အရမ်းခံစားသွားရကာ ၀ီစကီတွေသောက်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ မလှမပ ဇတ်သိမ်းသွားရပါတယ်။ မိမိရဲ.အမှားကို သိပြီး ယူကျုံးမရ ဖြစ်သွားတဲ. မိန်းမကလည်း ယောက်ကျားအတိုင်း ၀ီတွေသောက်ပြီး တမလွန်မှာ တောင်းပန်ဖို.လိုက်သွားပါတယ်။
ခံစားပြီး နားထောင်ကြည်.နော် တစ်ကယ်ကို လေးနက်တဲ. သီချင်း ဇတ်လမ်းလေးဆိုတာ သိသွားပါလိမ်.မယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အားလပ်ချိန်များမှာလည်း ကျနော် ဒီသီချင်းလေးကို လိုက်ဆိုတတ်လေ. ရှိပါတယ် ရင်ထည်းမှာ ခံစားချက်အပြည်.နဲ.ပေါ.နော်။ အစ်မကန်ဒီတို.လို အသံမကောင်းတော. မူရင်းအဆိုတော် အသံနဲ.ဘဲ တင်ထားပါတယ်--။ မောင်မောင်လို အဆိုဝါသနာပါတဲ.သူများအတွက် သီချင်းစာသားလေးပါ ထင်ထားပေးတယ်နော်။ ဒါပေမယ်. စုံတွဲသီချင်းဆိုတော. -- ဟဲဟဲ သဘောပေါက်မှာပါ။ အပျိုကြီး အစ်မစံတို. မန်လာသူ အစ်မယဉ်မွန်တို.ဆို ဆိုလို.မရလောက်ဘူး-- :) ။ အစ်မ ဂျက်စမင်းကတော. ခန်.မန်းတတ်ဘူး --- ကိုမောင်တို. ကိုချင်းတို. ကို8ရာတို.ကတော. ဆိုလို. ရလောက်တယ် ----
ချစ်ကြတဲ. ချစ်သူတိုင်း ချစ်သူတိုင်း သစ္စာရှိရှိချစ်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by မောင်မောင် at 21:11
အဆိုတော်တွေ အသံကလည်း ရေလည်မိုက်တယ်... :D
စုံတွဲသီချင်းဆိုတော့အနစ်နာခံပြီး jas ပဲဆိုပြလိုက်ပါမယ်
ဟာဟာ ဟုတ်ပနော်။ အစ်မ ဂျက်စမင်းကတော. စွံမဲ.ပုံပေါက်တယ်။